တရုတ်စွမ်းအင်မီတာ၊ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုစွမ်းအင်မီတာ၊ စမတ်စွမ်းအင်မီတာ - Donsun
ကြီးမားသော Power Metering ယူနစ်
Multi Tariff စွမ်းအင်မီတာ
အရင်းအမြစ်နှစ်ခု ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု စွမ်းအင်မီတာ
Shenzhen DONSUN နည်းပညာ Co., Ltd သည် စမတ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဂျာမနီ၊ ဂါနာ၊ ကိုလံဘီယာနှင့် အခြားများစွာသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်ကြီးအငယ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် မီတာတိုင်းတာခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အထူးပြုသော မတူညီသောအဖွဲ့များရှိသည်။
သင်လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုအဆင့်ကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည့် ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခု ရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။
STS ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု စွမ်းအင်မီတာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု STS စံနှုန်းကို အခြေခံသည့် စွမ်းအင်မီတာ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့် built-in latching relay ဖြင့်၊ ဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုကို utility ၏ထိန်းချုပ်မှုဗဟိုမှလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
၎င်းသည် မီတာအတွင်းရှိ အချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး မီတာကို အဝေးမှ ပေးပို့ရန် အသုံးဝင်မှုများနှင့် ပါဝါအသုံးပြုသူများကို ပေးဆောင်နိုင်စေပါသည်။
Three Phase Smart Energy Meter
RF2Phase3Wire Energy Meter
Shenzhen DONSUN Technology Co., Ltd သည် စမတ်တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှ R&D အဖွဲ့ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေစုဆောင်းမှုနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများ စိတ်ကျေနပ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆန်းသစ်သော်လည်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဂျာမနီ၊ ဂါနာ၊ ကိုလံဘီယာနှင့် အခြားများစွာသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်ကြီးအငယ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီနှင့် သင့်ဖောက်သည်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် သင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များကို ထိထိရောက်ရောက် တုံ့ပြန်ရာတွင် အဓိကကျသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
STS ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု စွမ်းအင်မီတာ
စမတ် ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု စွမ်းအင်မီတာ
ကြိုတင်ငွေဖြည့်လျှပ်စစ်မီတာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
1. ပါဝါဝယ်ယူပြီးနောက် အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်ပါ။
2. ရွေးချယ်နိုင်သော ဝန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဝန်ပိုနှောင့်နှေးမှု ပါဝါပိတ်ခြင်း။
ဘက်စုံသုံး watt-hour meter တွင် လုပ်ဆောင်ချက်မည်မျှရှိသနည်း။
အချိန်ကာလအမျိုးမျိုးတွင် တစ်ခုတည်းနှင့် နှစ်လမ်းသွား တက်ကြွပြီး ဓာတ်ပြုစွမ်းအင်ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ လက်ရှိပါဝါ၊ ဝယ်လိုအား၊ ပါဝါအချက်နှင့် အခြားဘောင်များကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် ပြသမှုကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အနည်းဆုံး မီတာဖတ်ခြင်း၏ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ ဒေတာကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
စွမ်းအင်မီတာ၊ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု စွမ်းအင်မီတာ၊ စမတ်စွမ်းအင်မီတာ သို့မဟုတ် စျေးနှုန်းစာရင်းအကြောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Add: Block 11၊ Shenzhen Software Park II၊ Nanshan ခရိုင်၊ Shenzhen၊ Guangdong၊ China
မူပိုင်ခွင့် © 2022 Shenzhen Donsun Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.